Tag: kero yekusimbisa | Martech Zone
Tag: kero kusimbiswa
Chishanu, June 26, 2020 Muvhuro, Mbudzi 2, 2020 Douglas Karr
Ndisati ndashanda online, ndakashanda kwemakumi gumi mupepanhau uye ndakananga maindasitiri ema mail. Nekuti kutumira kana kutumira kutaurirana kwekushambadza kwaidhura kwazvo, isu taive takangwarira zvakanyanya nezve hutsanana hwe data. Isu taida chidimbu chimwe chete pamhuri, kwete zvakare. Kana isu tikaendesa boka rezvakangofanana tsamba dzakanyorerwa kukero, zvakakonzera nyaya dzinoverengeka: Mutengi akagumbuka uyo angazosarudza-kunze kwese kutaurirana kwekushambadzira. Kuwedzera mari yebhadharo kana